Shwe@Brunei: သားတော်မောင် ခြေကျိုးခြင်း
Brunei ကေ၇ွှမြန်မာ မိသားစုလေးအကြောင်းပါ.....
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂံနွေ က သားသူငယ်ချင်း၇ဲ့ မွေးနေ့သွားပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ဒီကထုံးစံ အတိုင်း Bouncer တွေ ပါတယ်။
အဲ့ ဒီ လို သား ကဆော့ ၇င်းနဲ့ အောက်ေ၇ာက်နေတုံး အပေါ်က ကလေးတယောက် က
ဆလိုက် ထိုးဆင်းလာ၇င်းနဲ့ သား၇ဲ့ ညာ ဖက်ခြေသလုံး ကို ကန်လိုက်သလို ဖြစ် သွားတာပေါ့။
သား ကတခါထဲ အ၇မ်းနာ သွားလို့ငိုပါတယ်။
အိမ်ရှင် ကလဲ ဂရုစိုက်ပါတယ်။ ချက်ခြင်း အဝတ် အစားလဲခိုင်း ပြီး ထိုင်ခိုင်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ က ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အနားမှာ မရှိဘူးလေ..
ကြည့်လိုက်တော့ သားတော်မောင်က ရွင်ရွင်လန်းလန်း ဆိုတော့ အပယိက ပဲလို့ထင်မိတာပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်လုံးကျောင်းသွားတယ်..ဆော့တယ်..ေ၇ကူးသင်တန်း သွားတယ်။ ပုံမှန်ပါပဲ..
အဲ... ငြိမ်နေတဲ့အချိန်ဆို၇င်တော့ နာတယ်လို့ ညည်း ရှာတယ်။
သား က စကားတတ်တော့..ဟန်လုပ်တယ်လို့ ပဲ ထင်မိတယ်လေ..။
ဒီနေ့ မနက်တော့ သူ့အမေက ဒီမှာလုပ်နေတဲ့ အာစီယံ အစည်းအဝေး အတွက် ကျောင်းနှစ်ပတ်ပိတ်တာနဲ့ RIPAS ဆေးရုံ သွားပြဖြစ်တယ် ။
ဆေးရုံ က ကား၇ပ်၇တာ ခက်လို့ မသွားချင်တာလဲ တကြောင်းပေါ့ဗျာ။
ဆေးရုံေ၇ာက်တော့..မြန်မာဆ၇ာဝန်နဲ့ ပြ ၇တယ်...ရှင်းပြ ၇တာလွယ်တာပေါ့။
Medical အသုံးအနှုံးတွေ Used to မဖြစ်တာနဲ့ အတော် ပေါ့လေ။
ပုံထဲက အစိမ်းေ၇ာင် အရိုးလေး အက်သွားတာပေါ့။
POP ကိုင်ထားတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းနှစ်ပတ် ပေါ့။
POP ကိုင်ပြီး ခေတ္တနားတဲ့ အခန်းထဲေ၇ာက်တော့ မလှုပ် မရှား ၇တော့ စူပုတ်နေတဲ့ပုံ (ဆေးရုံမှာနေ၇မယ်ဆိုလို့လေ)
ပြန်ခါနီး BP တိုင်းနေတော့ပျော်သွားတဲ့ပုံ
ဆေးရုံက ခေတ္တ တင်ထားတဲ့အခန်းလေးမှာ ညနေ လေးနာ၇ီ မှာပြန်လာပါတယ်။
ဒီနေ့သွား၇...လုပ်၇မဲ့ဟာတွေ မလုပ် ၇တော့ပါဘူး။
အေ၇းကြီးတာပြောဖို့မေ့တော့မလို့...စလုံး ကလူတွေ ဆေးရုံပြ သလို ထောင်ချီမကုန်ပါဘူးဗျာ.
ဒီမှာ နိူင်ငံခြားသား ဖြစ်ဖြစ် ..နိူင်ငံသားဖြစ်ဖြစ် ကလေး အသက် ၁၂ နှစ် မကျော်၇င် တပြားမှ မပေး၇ပါခင်ဗျာ..။
အကိုကြီး ဆူလတန် ကျန်းမာ..ချမ်းသာပါစေပေါ့ဗျာ..
Posted by ရွှေဘ၇ူနိူင်း at 19:53
၁၂ နှစ်အောက်ကလေးအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အပြည့်ပေးထားတာကိုး...အေးဗျာ...စူလတန်ကြီးကျန်းမာလန်းဖြာပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်မိပါရော....
cheap brand new site [url=http://www.amyhanson.co.uk/]Louis Vuitton Outlet UK[/url] on the marshes to spread out noisy
Cut down about high heat until eventually sauce uniformity. Pressure prior to offering, in case needed. Golf slice lamb as well as serve using hot sauce recipe drizzled outrageous.. I'm an electrical electrical engineer plus am 100% pertaining to wellbeing and, nevertheless assessing fixingaheating part in order to updatingastiffen along with cable can be pears and oranges. Primary, you will find [url=http://www.labsource.co.uk/]Michael Kors UK Outlet[/url] at the very least A couple of authentic factors of world [url=http://www.lilyslings.co.uk/]Louis Vuitton Sale Uk[/url] security relaxing next to the look at each clothes dryer manufactured accessible in the united states. You could REPLACE this aspect havingatime bailing line and could have justablown Blend.
If we do times, I began seeingafew things. Firstly, finnish language is utterly distinctive from some other you may have discovered (apparently it's got resemblances having Hungarian that was obviously definitelyagood choice for me personally.). Then, the city is [url=http://www.lilyslings.co.uk/]Louis Vuitton Outlet UK[/url] absolutely well organized, plus everything seems to operate in harmony plus properly.
Of course, she gets previously correctly reduceapackage using Content Feet on her behalf personal Snooki created giant unclear slipper collection, which includes consumed in Some stats throughout sales. Your ex online marketing strategy of the off of passed Tweet or perhaps Twitter publish about the woman merchandise appear to be wizard. She is developing the Valentine's pendent for that firm later on this year..
2 September 2014 at 16:20
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ - အသိဥာဏ်နည်းတဲ့လူက ကြွားဝါတတ်ခြင်းကို ခုံမင်တယ် ဥာဏ်ပညာနည်းတဲ့လူက ဒေါသထွက်ပြီးပေါက်ကွဲလွယ်တယ် စိတ်ဓါတ်သေးသိမ်သူက သူတစ်ပါး အတင်းပြောတာဝါသနာပါတယ...